A Week in the Horn of Africa 14/10/2011
Dhaala Kaayyoo Dhalootaaf
Ummanni Oromoo haacuuccaa gita bittaa jalaa bahuuf qabsoo bifa bittinnaa'een adeemsisaa tureera. Waa'een qabsoo ummata Oromoo baayyeen jedhameera. Seenaa waan ta'eefis hedduu jechuun ni danda'ama.
Ummatichis duudhaalee gurguddoo eenyummaasaa ibsu qaba. Kanneen keessaa sirni gadaa, seenaan ummattoota biyyattii waliin jiraachuu, meedhichaafi moggaasaan Oromeessuu… kkf. eeruun ni danda'ama.
Ummanni Oromoo haacuuccaa sirnoota darbaniin duudhaalee kanneen gabbifachuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e bara baayyeef yoo bifa bittinnaa'een ta'es, qabsoon ummata Oromoo dhaabbatee hin beeku. Fakkeenyaaf qabsoo qonnaan bultoota Baalee, harma muraa Aannolee…kkf. kaasuun ni danda'ama.
Dh.D.U.On haacuuccaafi cunqursaa gitni bittaa ummata Oromoo irraan gahaa ture isa dhumaatiif dhabamsiisuuf dhaabbilee biroo wajjin ta'uun kitimaa kaffalameen nageenyi, mirgi demokraasiifi namoomaa ummata keenyaa heera mootummaatiin wabii argateera.
Dh.D.U.On waggoottan 21f naannoo keenya bulchuu qofaa utuu hinta'in, guddina siyaas-dinageefi hawaasummaa argamsiiseera. Dhaabbanni keenya Dh.D.U.On kaleessa miseensota muraasan qabsoo eegale, qaanqee xinnoon gimii taatee, har'a miseensota miliyoona 2.3 horachuu danda'eera.
Akka ragaan istaatiksii lakkoofsa manaafi namaa biyyaaleessaa mirkaneessuutti, baayyinni ummata naannichaa 27,158,471 keessaa lakkoofsi dargaggootaa 7,387,256 yemmuu ta'u, baadiyyaan 6,064,749, magaalaan 1,322,504 jiraatu, Akkasumas dubartoonni walakkaa hawaasaati. Kanaafuu qooda fudhannaa dubartootaas ta'e, kan dargaggootaa siyaas-dinagdeefi hawaasummaa keessatti cimsuun hojii ol'aanaa gaafata. Kanaaf ammoo qaamolee armaan olitti eeraman kana of cinaa hiriirsuuf leenjiin yeroo yeroon kennamu xiyyeeffannoon kennamuusaa agarsiisa. Kana irraa ka'uudhaanis Dh.D.U.On dargaggotaafi dubartoota lakkoofsaan 2000 ta'aniif waltajjii kaayyoon kun itti hubatamu uumuudhaan, itti fufiinsa kaayyoo kanaa mirkaneessuuf, dhaloonni itti aanu kaayyoo kanaan qaramee, dandeettii hoggantummaasaa cimsachaa, akkasumas wal harkaa fudhinsa kaayyoo dhaloota gidduutti raawatamaa dhufeen as gahe, boris itti fufa. Injifannoowwan hamma ammaatti argames kitimaa /haarsaa/ ummanni Oromoo Dh.D.U.O cinaa hiriiruun gonfatedha. Bu'aawwan arganne itti fufsiisuuf maal gochuu qabna.
Gama biraatiin, qabsoon ijaarsa sirna demokraasiifi misoomaa irratti taasifamaa jiru yoomiyyuu caalaa itti fufuu qaba. Waggoottan 21 darban keessaa hojiiwwan misoomaa hojjetamaa turaniin, bu'aaleen gurguddoon kallattiin galmaa'aniiru. Mootummaan Dh.D.U.On hogganamu rakkoo dinagdeefi hawaasummaa dargaggootaafi dubartootaa hiikuuf paakeejii misoomaa waggoota 4 dura baasuun hojii irra oolcheera. Keessumaa ammoo paakeejiin misoomaa IMX isa tokko. Paakeejii kanaanis hoji-dhabdoonni kuma 300 fayyadamoo ta'aniiru. Kun ta'ee utuu jiruu kanneen gufuu guddinaa ta'an immoo kun itti hin mul'atu? Maal haagoonu?
Gama biroon ammoo, kanneen paakeejiiwwan misoomaa ba'an, wabii guddina dinagdeefi hawaasummaa ta'an, gufachiisuu kan fedhan, ilaalchaanis ta'e gochaan yeroo kaatan mul'atu. Kanneen keessaa kiraasaassabdonni isaan tokko. Kanaaf tooftaan ittiin dhabamsiifnu maal haata'u?
Haa ta'uutii, qabsoon farra hiyyummaa nijalqabame malee hin xumuramne. Kanaafis mudhii keenya sabbataan hidhachuun itti fufuu qabna. Har'a biyyoottan boba'aa gurgurachuun dinagdee saffisaan galmeessisan cinaatti yemmuu ilaalamu, guddinni biyya keenya keessatti itti fufiinsaan galmaa'uunsaa, dhugumattuu imaammannii fi tarsiimoon misoomaa biyyi keenya hordoftu sirrii ta'u agarsiisa. Kanaafis qabsoon walirraa hincinne finiinsuu qabna jenna.
About Us | Policy | Contact Us | ©2010 OPDO